Xukuumadda Turkiga Si Adag Uga Hadashay Weerarkii Muqdisho - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Published On: Sat, Mar 6th, 2021
Somalia / Warar | By admin
Xukuumadda Turkiga Si Adag Uga Hadashay Weerarkii Muqdisho
#Turkigu Muxuu Ka Yidhi Taageerada Soomaaliya
Ankara(ANN)-Xukuumadda Turkiga, ayaa si adag uga hadashay weerarkii qaraxa ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho xalay, kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 20 qof.
Xukuumadda Ankara, ayaa ka mid ah dhawr dowladood oo taageera dowladda federaalka Soomaaliya, is;a markaana gacabta ku haysa dekadda iyo madaarka Muqdisho.
Sidoo kale, Turkiga ayaa taageero mIlateri iyo mid dhaqaale siiya dawladda Federaalka ee Soomaliya, iyadoo tababaro siisa ciidamada dawladda Federaalka.
War saxaafadeed kasoo baxay Wasaarada arimaha dibedda Turkiga ayaa lagu sheegay sida ay uga xun yihiin qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee ismiidaaminta ahaa, kaas oo xalay lagu weeraray makhaayada Luul Yemeni ee dekedda Muqdisho.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarka foosha xun ee argagaxiso waxaanan tacsi u direynaa shacabka walaalaha ah iyo Dowlada Soomaaliya.” ayaa lagu yidhi, war saxaafadeedka.
“Waxaan u rajeynaynaa naxariista Eebbe korkiisa kuwa naftooda ku waayey, kuwa dhaawacmayna waxaana u rajeeyneynaa caafimaad deg deg ah” ayaa lagu yidhi.
War saxaafadeedka arrimaha Dibbeda Turkiga, ayaa lagu sheegay mawqifka dawladda Turkiga ee Soomaaliya, waxaana lagu yidhi sidan:-
“Waxaan mar kale carrabka ku adkeyneynaa inaan sii wadi doonno garab istaagga dadka walaalaha ah e Soomaaliya ee dagaalka ay kula jiraan argagixisada ayay war saxaafadeedka ku tidhi wasaaradda Arrimaha Dibedda Turkiga.
Weerarka oo aha Bam, ayaa habeenimadii Jimcaha ka dhacay makhaayada Luul Yameni ee duleedka Dekadda Muqdisho, waxa ku naf waayay ugu yaraan dad gaadhaya 20-qof, kuwaas oo isugu jira ciidan, shaqaale dawladdeed iyo dad shacab ah.
Dr. Abdulkadir Ahmed oo ah gurmadka Amiin Ambulance , ayaa u sheegay Reuters in dhaawacu gaadhay ilaa soddon qof, halka dhimashadu gaadhay ilaa 20 qof.